Itiyoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii mana keessatiin addunyaa irraa 2ffaa Afrikaa irraa ammoo 1ffaa ta’uun xumurte - ! - OBN
Itiyoophiyaan shaampiyoonaa atileetiksii mana keessatiin addunyaa irraa 2ffaa Afrikaa irraa ammoo 1ffaa ta’uun xumurte
[OBN 27 06 2010] Shaampiyoonaan Atileetiksii Mana-keessaa Addunyaa 17ffaa Ingilizii Barmiinghaamitti guyyoota afuriif dorgomamaa ture kaleessa xumuramee jira.
Dorgommii kana irratti kan hirmaatte Itiyoophiyaanis Addunyaa irraa 2ffaa, Afriikaa irraa ammoo 1ffaa ta'uun xumuruu dandeesseetti.
Shaampiyoonaa Atileetiksii Mana-keessaa Addunyaa 17ffaa kana Ameerikaan warqee 6, birrii 10 fi maaldaa 2 argachuun addunyaa irraa 1ffaa ta'uun xumuruu dandeesseetti.
Itiyoophiyaan ammoo warqee 4 fi Birrii 1 walumaagalatti medaaliyaa 5 argachuun sadarkaa lamaffaa qabattee xumurteetti.
Itiyoophiyaatti aanuun Poolaand warqee 2, birrii 2 fi maaldaa 1 walumaagalatti medaaliyaawwan 5iin sadarkaa sadaffaa wayita qabattu, Biritaaniyaan, Firaansii fi Kootidivuwaar sadarkaa 4ffaa hanga 6ffaa jiru qabachuu danda'aniiru.
Sadarkaa Afrikaatti wayita ilaallu Itiyoophiyaan medaaliyaawwan argatteen Afrikaa irraa tokkoffaa taatee wayita xumurtu, Warqee 1, fi birrii 1 kan argatte Koote Divuwaar 2ffaa, Burundiin warqee 1 argatte ammoo 3ffaa ta'ani jiru.
Medaaliyaawwan Itiyoophiyaa kan argamsiisan , Atleet Ganzabee Dibaabaa- meetira 3000 fi 1,500 dubartootaan meedaaliyaawwan warqee lama, Atleet Yoomiif Qajeelchaa - meetira 3000 dhiirotaan medaaliyaa warqee, Atleet Saamu'eel Tafarraa - meetira 1,500 dhiirotaan medaaliyaa warqee argamsiisani jiru. Atileet Salamoon Baarraggaa ammoo - meetira 3000 dhiirotaan Itiyoophiyaadhaaf medaaliyaa birrii argamsisisee jira.
544 Views 3/6/18